१५ दिन समय दिँदा लोकमानले अन्यत्र पनि हान्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ क्या ! – YesKathmandu.com
१५ दिन समय दिँदा लोकमानले अन्यत्र पनि हान्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ क्या !
संसदले लोकमान सिंह कार्की महाअभियोगबारे १५ दिनसम्म छलफल स्थगन गरेकोप्रति म सन्तुष्ट छैन । यो प्रकरणलाई चाँडो टुंग्याउनु चाहेको थिए । यो प्रकरणलाई १५ दिन समय दिँदा यसले अन्यत्र पनि हान्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।
१५ दिन त किन रोकेको होला ? हाम्रो र मेरो चाहना भन्नुहुन्छ भने छिट्टै होस भन्ने हो । तर, ढीलो भयो ।’
मलाई चिन्ता त्यही छ क्या ! १५ दिन समय छ, अन्त अन्त हान्ला कि ? चिन्ता छ । तपाईहरु (पत्रकारहरु) सबै मिलेर मलाई मद्दत गरिदिनुभयो भने मेरो चिन्ता दूर हुन्छ । सक्दैन कसैले पनि । नेपाल र नेपाली नै मेन हो ।’
खुशीको कुरा यो प्रकरणले दलहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनाएको छ । सबैले माहोल बनाउँदा बन्दोरहेछ । महाअभियोगले संविधान संशोधनलाई असर नगर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा हामी सबैको हो । यो महाअभियोग र संविधान संशोधन अलग अलग विषय हो । तर, जोडिने खतरा पनि हुन्छ नेपालमा त ।’
तिहार आउँदैछ, छठ पनि आउँदैछ । भारतका राष्ट्रपतिको भ्रमण छ । यी सबै कारणले अलिकति उता लैजाने भन्ने भयो । तर, यसैका कारण कन्फ्यूजन भयो भन्ने होइन ।’
अब अख्तियारमा कसलाई ल्याउने ? हाम्रो समझदारी भएको छ । यसले मलाई सन्तोष लागेको छ । मैले पनि, ओलीजीले पनि र शेरबहादुरजीले पनि एउटै ठाउँमा राम्रोसँग मिलेकै स्पिरिट छ । यसरी जाने है, त्यहाँ विवाद गर्ने होइन है भनेपछि धेरै ठूलो सन्तोषको विषय भएको छ । त्यो समस्या छैन अब ।’
महाभियोगले प्रधानमन्त्री दाहालको पुन: नाता गाँसियो
श्रीमतीसंगको झगडाले श्रीमानलाई सेती नदीमा बेपत्ता बनायो
सशांकको स्वास्थ्य उपचारमा राजधानीका १५ चिकित्सक एकै ठाउँ जम्मा
यसरी पत्ता लाग्यो दुर्घटनाग्रस्त अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर
मानवअधिकार आयोगले वेनी आक्रमणका दोषीलाई कारवाही गर्न दियो सरकारलाई निर्देशन
माधव नेपालको दाबी, ‘सत्तापक्षले नै फ्लोर क्रस गर्छ’
विद्यालयको पर्खाल भत्किदा गर्भवतीको मृत्यु
संविधान संशोधनको ड्राफ्टमा सहमति जनाउदै फोरम सरकारमा सहभागी हुने